Aabaha dhalay xiddiga kooxda Arsenal iyo Xulka qaranka Jarmalka ee Mesut Ozil oo si weyn u difaacay Wiilkiisa – Gool FM
Aabaha dhalay xiddiga kooxda Arsenal iyo Xulka qaranka Jarmalka ee Mesut Ozil oo si weyn u difaacay Wiilkiisa
Byare July 9, 2018
(Germany) 09 Luuliyo 2018. Isagoo ka hadlayey eedeymaha loo soo jeediyay xiddiga kooxda Arsenal iyo xulka qaranka Jarmalka Mesut Ozil ayuu Aabbaha dhalay xiddigan si weyn u difaacay wiilkiisa kaddib markii xulka Jarmalku si fool xun uga soo haray Koobka Adduunka ee sanadkan ka socda Waddanka Ruushka.
Saxaafadda Jarmalka ayaa cadaadis wayn saartay ciyaaryahan Ozil, kaddib markii intii uusan bilaaban Koobka Adduunka 2018 uu xidiggani sawir la soo galay Madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, waxaana sawirkaasi uu aad uga careysiiyay dadka Jarmalka oo shaki geliyay daacad u ahaanshihiisa xulka Jarmalka.
Dhinaca kale waxaa intaa sii dheer in laacibkii hore ee xulka Jarmalka Oliver Bierhoff uu wareysi uu bixiyay Jimcihii ku sheegay in ay ku fiicnayd in xulka Jarmalku uusan Koobka Adduunka u xulan Ozil, maadaama sida uu yiri uu caddeyn waayay mowqifkiisa ku aaddan sawirkii uu la galay Erdogan, inkastoo madkii dambe uu Bierhoff raali-gelin ka bixiyey arrintaas.
Mustafa Ozil oo ah Aabaha Mesut Ozil oo wareysi siiyay Wargeyska ‘Bild am Sonntag’ ee Jarmalka ayaa waxa uu ku difaacay wiilkiisa 29-jirka ah, isagoo sheegay in Bierhoff uu ku qaldanaa hadalka ka soo yeeray.
“Wiilkeyga si asluubeysan ayuu sawir ula galay Erdogan, siyaasadna ulama uusa jeedin, mana doonayo wiilkeygu in uu mowqifkiisa ku aaddan sawirkaasi caddeeyo, waayo wuxuu ka tirsan yahay xulka Jarmalka, muddo 9 sanadood ah ayuuna u ciyaarayaa, wuxuuna kula guuleystay Koobka Adduunka,” ayuu yiri Ozil Aabihiis.
“In badan ayuu wax ku biiriyay dalkani, laakiin xaalku wuxuu noqday haddii aan guuleysanno si wadajir ah ayaan u guuleysannay, haddii aan guuldarreysanana waxaa khasaarada noogu wacan Ozil, haatan waa la cambaareynayaa sida in uu qaladkii Koobka Adduunka uu isagu lahaa, anigoo dareemaya heerka ihaanno ee loo geystay.” ayuu sii raaciyay hadalkiisa Mustafa Ozil.
Mustafa Ozil ayaa mar uu ka hadlayey mustaqbalka wiilkiisa ee ku aaddan xulka Jarmalka waxa uu yiri: “Isaga ayay u taallaa inuu go’aan ka gaaro, laakiin haddii aan anigu booskiisa ku jiri lahaa, waxaan Jarmalka oran lahaa waad mahadsan tihiin, boogta/nabarku wuu sii weynaanayaa, yaa og waxa dhici doona kulankooda soo socda, haddii aan booska Ozil ku jiri lahaa waan ka dheeraan lahaa Jarmalka, waana fikirkayga qof ahaaneed”.
Xiddigaha xulka qaranka Jarmalka ee Mesut Ozil iyo Ilkay Gundogan ayaa la kulmay Madaxweynaha Turkiga ee Erdogan bishii May ee la soo dhaafay, waxaana ay wada galeen sawir wadajir ah, iyadoo labada laacib funaanadaha Kooxahooda ay haddiyad ahaan u siiyeen Erdogan, iyadoo funaanaddii Arsenal ee Ozil uu ku saxiixay: ‘Ku socoto Madaxweynahayga!”.
Difaaca reer France Benjamin Pavard oo difaacay saaxiibkiis Hugo Lloris, kadib markii uu dhaleeceen kala kulmay wargeysyada.
“Waxaan joojinay xidigaha Lionel Messi iyo Christian Eriksen, haatan waxaa la gaaray xiliga Harry Kane”… Zlatko Dalic